धुर्मुस Archives - Khoyaa
Home / Tag Archives: धुर्मुस
Tag Archives: धुर्मुस
धुर्मुस सोल्टा को b’day party
धुर्मुस ले आफ्नो साथीहरुलाई पार्टी दिने प्रोग्राम बनायो … अनि आफ्नै घर बाट राति बाख्रा चोरी गर्यो र खुब मोज संग राति पार्टी पनि गर्यो …. बिहान जब धुर्मुस घर पुग्छ त बाख्रा घरमा नै देखेछ ….अनि सुन्तली संग सोद्यो धुर्मुस : यो बाख्रा कहाँ बाट आयो ? : : …
धुर्मुस आफुलाई खुब स्वर सम्राट मान्थ्यो……….यतिक् कैमा एकदिन एउटा किसानलाई गीत सुनायो………. केही बेर पछी किसान सुक-सुक गर्दै रुन थाल्यो ….) धुर्मुस :- (मन मनै खुशी हुँदै ) खुशी लाग्यो मेरो सँगीतको राग बुझ्ने तिमी मात्रै रहिछौ. किसान ;- म हजुरको गीत सुनेर रोएको होइन …. धुर्मुस :- अनी किन …